सामुदायिक अस्पतालद्वारा अत्याधुनिक सेवा थप
इटहरीको सबैभन्दा पुरानो निजी लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालले अत्याधुनिक सेवा थप गरेको छ । अस्पतालले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्नो सेवा बिस्तार गरेको जानकारी दिएको छ । अस्पतालले २४ सै घण्टा आकस्मिक हाडजोर्नी, नशा तथा
प्रकाशित मितिः बैशाख	३, २०७९
डा. ऋतुराज सुवेदीको सेवा इटहरीको बेदान्त हस्पिटलमा उपलब्ध हुने
इटहरी/ डा.ऋतुराज सुवेदीको सेवा इटहरी स्थित बेदान्त हस्पिटलमा उपलब्ध हुने भएको छ। सुवेदीले अव दैनिक रुपमा भिडियो एक्सरे सम्बन्धि सम्पुर्ण सेवा प्रदान गर्नुहुने भएको हो। लामो समय देखी बिभिन्न अस्पतालहरुमा आबद्ध रहेर रेडियो इम
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ११, २०७८
यौनक्षमता बढाउन चाहनुहुन्छ ? खानुहोस यि ११ चिज
न्युजडेस्क/ यौनक्षमता बढाउने चाहना सबैलाई हुन्छ तरपनि हामीले यस बिषयमा ध्यान दिएका हुँदैनौ । आज हामीले केहि घरेलु उपाय बारे जानकारी दिँदैछौ । यौनक्षमता बढाउन निम्न बस्तुहरु खाँदा यौनक्षमता बढ्ने बिश्वास गरिन्छ। खरबुजा :खरब�
नोबेलमा बिना चिरफार दुरबिनको माध्यमबाट गरियो मस्तिष्कको सफल शल्यक्रिया
बिराटनगर/ मोरङको बिराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा चिरफार र घाउ नबनाई दुरबिनको माध्यमबाट मस्तिष्क भित्रको ट्यूमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। नोबेलका बरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.प्रकाश काफ्ले नेतृत्वको चिकित्सकहरुको टोलीले झ
इटहरी/ बिश्व समुदाय एवं हाम्रो देशमा कोरोना भाईरस संक्रमणको फैलावट ब्यापक एवं तिब्र ढंगले बढिरहेको र यसले मानवीय जीबनमा ठुलो संकट पैदा गरिरहेको छ। यस्तो बिषम परिस्थीतिमा कोभिड&ndash;१९बाट संक्रमितहरुको फोक्सोमा तीन महिनाभन्दा �
प्रकाशित मितिः बैशाख	२६, २०७८
1029 पटक पढिएको
नोबेलमा सफलतापूर्वक गरियो घाँटीको क्यान्सरको जटिल शल्यक्रिया
बिराटनगर/ मोरङको बिराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको जटिल शल्यक्रिया सफलतापूर्वक गरिएको छ। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका-५ का सफिद मियाँको घाँटीको &lsquo;भ्वाइस बक्स&rsquo; मा भएको क्यान्सरको जटिल शल्यक्रिया सफल�
प्रकाशित मितिः बैशाख	१, २०७८
1629 पटक पढिएको
उत्कृष्ट यौन जीवनका लागि के नखाने,के खाने ?
एजेन्सी/ पार्टनरबीच सम्बन्ध बलियो बनाइराख्नका लागि यौनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यौन जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि मानिसहरु विभिन्न प्रकारको तरिका अपनाउने गर्छन्। तर के तपाईंलाई खानपिनले पनि यौन जीवनमा अत्यधिक प्रभाव पा�
केएमसीको शिविरबाट गोदावारीका ७ सय बिरामीको निःशुल्क उपचार
काठमाण्डौ/ संघीय राजधानीस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले आइतबार ललितपुरको गोदावारी नगरपालिकामा सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ७५३ बिरामीले निःशुल्क उपचार पाएका छन्। बिपन्न बिरामीलाई लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्�
प्रकाशित मितिः चैत्र २, २०७७
इटहरीस्थित वेदान्त हस्पिटलमा मनोज लाखेद्वारा दैनिक मुटुरोगको उपचार हुने
इटहरी/ पूर्वमा रहेर लामो समय अगाडिदेखि बिभिन्न अस्पतालमा आबद्ध रहि प्रेसर तथा मुटुरोगको उपचार गर्दै आउनुभएका बरिष्ठ प्रेसर तथा मुटुरोग बिशेषज्ञ डा.मनोज गोबिन्द लाखेले इटहरीमा रहेको वेदान्त हस्पिटलमा सेवा प्रदान गर्नुहुने भ
प्रकाशित मितिः चैत्र १, २०७७
पेट दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपचार
पाचन प्रक्रिया अव्यवस्थित हुँदा पेटसम्बन्धी रोगहरुको जन्म हुन्छ। पेट सम्बन्धी रोगहरुमा धेरै प्रकारका रोगहरु पर्दछन् जस्तै अपच हुनु, कब्जियत हुनु, अमलपित्त आदि। घरमै उपलब्ध हुने औषधीहरुबाट हामी यस्ता रोगहरुलाई भगाउन सक्छौँ�
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ११, २०७७
काठमाण्डाै/ तपाईं मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजग हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है मानव शरीरभित्र करीब ९० प्रतिशत रोग मुख स्वास्थ्य अर्थात् दाँतजन्य समस्याका कारण हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। मुख स्वास्थ्यको संवेदनशील दाँतको स�
प्रकाशित मितिः माघ ३, २०७७
जाडो मौसममा किसमिस खाँदा फाइदै फाइदा
न्युजडेस्क/ किसमिसलाई बहुमुखी फलको रुपमा लिइने गरिन्छ। अंगुरलाई सुकाएर तयार गरिने किसमिस स्वास्थ्यका लागि विभिन्न गुणहरूले भरिपूर्ण छ। मानिसहरू खिरलगायतका विभिन्न पकवानहरू तयार गर्दा किसमिस हाल्न मन पराउँछन्। यसले खानाल�
प्रकाशित मितिः मंसिर ४, २०७७
कोरोना संक्रमण र सामान्य रुघाखोकी कसरी चिन्ने ?
न्युजडेस्क/ एउटा मौसममा स्वास्थ्य एकनासले चलिरहेको हुन्छ। मौसम परिवर्तन हुनेवित्तिकै स्वास्थ्यमा त्यसको प्रभाव पर्छ। एउटा मौसममा अभ्यस्त भएको शरीरलाई अर्को मौसमसँग अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। यस्तो बेलामा शरीरको इम्युनिटी डिस
बदाम र दुध खानुका फाइदै फाईदा
डेस्क/ बदाम र दुध पोष्टिक खाद्य मानिन्छ । नेपालीले अक्सर खाने यी खाद्यान्न स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत फाइदाजनक छन्। पछिल्लो समय नेपालमा बदाम र दुध मिसाएर बनाइएको बदाम ड्रिंक्स पनि लोकप्रिय हुँदैछ। यस्तो ड्रिंक्सले यी दुवै पौ�
प्रकाशित मितिः आश्विन २२, २०७७
रुघाखोकी र कोरोना भाइरसको लक्षणमा फरक
काठमाण्डौ / मौसम परिवर्तनसँगै अहिले मौसमी फ्लुको जोखिम बढेको छ। मौसमी फ्लु &nbsp;र कोरोनाका लक्षणहरु मिल्दोजिल्दो भएकाले सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना भाइरस (काेभिड&ndash;१९) को सङ्क्रमण भयो कि भन्ने शङ्का धेरैमा हुने गरेको छ।&nbsp
प्रकाशित मितिः चैत्र ५, २०७६
991 पटक पढिएको
नियमित थप्पड खाँदा छाला सुन्दर हुन्छ ?
एजेन्सी / आजको व्यस्त जीवनमा हामीहरु आफैंले आफैंलाई ध्यान दिनको लागि समेत समयको अभाव छ। चाहे घरमा होस् वा विदेशमा, कुनै न कुनै कारणले निराश छन् आजका मानिसहरु। कोही आफ्नो बिरामीपनासाग जुधिरहेका छन् भने कोही आफ्नो मोटोपना वा कोह�
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २८, २०७६
सर्वसुलभ पाईने बेथुको सागका फाईदै फाईदा
न्युजडेस्क/ तपाँई हामीले खेतबारीमा देखिराखेको बेथुको साथ तपाईंको भान्सासम्म कत्तिको आईपुग्ने गरेको छ ? अथवा तपाँईले भान्सामा बेथुको साग कत्तिको पकाउने गर्नु भएको छ ? यदी छैन भने खाने गर्नुस। किनकी यो स्वादका लागि मात्र होइन स्
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २४, २०७६
रक्सी यौन जीवनको बाधक कि सहयोगी
चकलेट र यौनबीच सम्बन्ध १६ औं शताब्दीमा एक स्पेनिश खोजकर्ता एर्नान कोर्तेस थिए। उनले माया र एजटेक साम्राज्यमा धेरै समय बिताएका थिए। उनले लेखेको किताबमा स्पेनका राजाले लेखेका थिए चकलेटले प्रतिरोधक क्षमताको निर्माण गर्छ र थकान
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २१, २०७६
कोरोनासँग लड्न के–के खाने ?
डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ कोभिड&ndash;१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले अहिले संसार आक्रान्त छ। नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा रहेका कारण सरकारले विभिन्न हिसाबले चेतनाका काम गरिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो दैनिकीमा केही
प्रकाशित मितिः फाल्गुन २०, २०७६
1292 पटक पढिएको